के आर्यनका लागि थ्रेट हुन् अनमोल ? « Mazzako Online
के आर्यनका लागि थ्रेट हुन् अनमोल ?
यदि, कुनै कलाकारको आगमन हुन्छ भने चलिरहेको कलाकारका लागि थ्रेट हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले फिल्म क्षेत्रमा अभिनेता आर्यन सिग्देलदका लागि अभिनेता भूवन केसीका छोरा अनमोल केसी थ्रेट बनेको चर्चा चलिरहेको छ ।
अनमोल केसी र आर्यन सिग्देलसँग धेरै कुरा मिल्छन् । आर्यन पनि आफ्नो चकलेटी अनुहारबाटै उदाएका हुन् भने अनमोल पनि त्यसैलाई सहारा लिइरहेका छन् । आर्यनका पनि यूवती फ्यान धेरै देखिएका छन् भने अनमोलको हकमा पनि यस्तै कुरा लागू हुन्छ ।
हुनत, अहिले आर्यनले भूमिका परिवर्तन गरिरहेका छन् । तर, आर्यन सिग्देल र अनमोल केसीको स्टारडमको तुलना हुन थालेको छ । अनमोलको नयाँ फिल्म ड्रिम्सको ट्रेलरले एउटा नयाँ रेकर्ड नै राखिसकेको छ । यो बर्ष आर्यनको पनि क्लासिक फिल्म रिलिज हुने तयारीमा छ भने अनमोलको ड्रिम्स ।
जुन फिल्मको व्यापार माथि हुन्छ, त्यसले दुई अभिनेताविच फेरि तुलानात्मक लडाई सतहमा ल्याइदिनेछ । अहिले चलेपनि नचलेपनि आर्यन नै फिल्म क्षेत्रमा हाबी छन् । यस्तै, हाबी छोटो समयमा नै बनिसकेका छन् अनमोल । के यस्तो अवस्थामा चकलेटी आर्यनका लागि चकलेटी अनमोल थ्रेट बनिरहेका छन्, बहस हुनु स्वभाविक नै हो ।